Euro Ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana tantara (2022)
Euro Ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana tantara
Euro Ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana tantara tantara satria 1999 mandra- 2022. Vola fiovam-po tabilao Euro Ny Malagasy ariary (2022).
Izahay dia mitazona ny tantaran'ny fifanakalozana amin'ny taham-bola rehetra isan-taona. Ny tantaran'ny Euro dia voatahiry ao amin'ilay tranokala isaky ny taona 1992. Ny tantaran'ny Euro to Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny taona. Ny tantaran'ny Euro to Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana tamin'ny 1992 ka 2022 hita eto amin'ity pejy ity. Ny tantaran'ny Euro to Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana tamin'ny 1992 ka 2022 isaky ny taona.
Ny tabilao ny tantaran'ny Euro to Malagasy ariary dia mampiseho ny teny rehetra tao anatin'ny 30 taona lasa. Ny tantaran'ny fifanakalozana ny taham-bolan'ny vola rehetra mandritra ny 30 taona amin'ny tranokala moneyratestoday.com Sarin'ny tantara momba ny Euro to Malagasy ariary nanomboka tamin'ny taona 1992 sy maimaim-poana. Azonao atao ny mahita ny tahan'ny Euro amin'ny tabilao raha toa ianao ka manakaiky ilay daty voafantina. Mandehandeha amin'ny tabilao ary jereo ny marina Euro mankany Malagasy ariary ho an'ny taona voafidy.
Niova fo Euro Ny Malagasy ariary Euro Ny Malagasy ariary Taham-panakalozana Euro Ny Malagasy ariary velona amin'ny fifanakalozana Forex tsena
Mey 2022 4179.891072
Aprily 2022 4637.616964
March 2022 3983.692149
Febroary 2022 4466.772230
Janoary 2022 4456.858357
Ny tantaran'ny Euro mankany Malagasy ariary dia misy ao amin'ny latabatra ho an'ny taona isan-taona nanomboka ny taona 1992. Azonao jerena ny lisitry ny tantaran'ny Euro nanomboka tamin'ny 1992 tao amin'ny tranokala. Tantaran'ny fifanakalozana amin'ny latabatra: Euro to Malagasy ariary Azo atao isan-taona: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 , 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Fanamarihana isam-bolana ao amin'ny Euro mankany Malagasy ariary, azonao jerena raha tsindrio ny rohy amin'ny taona eo amin'ny latabatra tantara ho an'ny taona. Raha te hahita ny Euro mankany Malagasy ariary nindramina ho an'ny isaky ny isam-bolana, tsindrio ny rohy ao anatin'ny latabatra taona.
Ny fiovana amin'ny fifanakalozana fifanakalozana mandritra ny fotoana maharitra dia hita mazava ao amin'ny pejinay momba ny tantaran'ny fifanakalozana. Tombanana hoatran'ny niova ny vola nateraky ny 10, 20 na 30 taona. Jereo ny tabilaon'ny teny nindramina nandritra ny fotoana maharitra. Ny dinamika lava mandritra ny Euro mankany Malagasy ariary afaka folo taona dia afaka manombatombana eto amin'ity pejy ity. Misafidiana vola hafa fa tsy ny Malagasy ariary hahitana ny tantaran'ny Euro hamidy amin'ny vola hafa.
Misafidiana vola fa tsy ny Euro mba hahitana ny tantaran'ny fifanakalozana ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary. Ao amin'ny tranokalanay dia afaka mahita ny tantaran'ny sandam-bola amin'ny olon-kafa ianao nandritra ny taona maro lasa izay. Euro to Malagasy ariary ho an'ny 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tsindrio ny taona ao amin'ny latabatra hahitana ny tantaran'ny Euro mankany Malagasy ariary.